हिरोइन बनाउन बा-को चिन्ता - TGuff | TGuff
हिरोइन बनाउन बा-को चिन्ता
31. Jul, 20120Comments
भावना रेग्मी। तस्विर साभारः फिल्मीखबर डट कम
भारतीय राजनीतिको कान्छो भाइजस्तो देखिने नेपाली राजनीति र बलिउडे रेल पछ्याउँदै घस्रने हाम्रो कलिउडे टेम्पोमा केही समानता छन्। राहुल गान्धीको राजनीतिक करिअर उनका पितापुर्खाले सुरु गर्दिएजस्तै सोनम कपुर र रणवीर कपुरहरुका संघर्ष तिनका बा-हजुरबाले गर्दिएका हुन्। बलिउडलाई आदर्श मान्ने हाम्रो सिने क्षेत्र चै के कम ! देख्यो कपी-पेस्ट ठोक्यो। फिल्म पनि उतैका कपी ! शैली पनि उतकैको!!
कुनै बेलाका चलेका निर्देशक शिव रेग्मी यतिबेला त्यही बलिउडे शैलीमा छोरीको चिन्ता गर्दैछन्। ओम अस्पतालमा नर्सिङ पेशामा रहेकी छोरी भावनालाई हिरोइन कसरी बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् उनी। आफ्नै बा निर्देशक भएपछि कसले रोक्थ्यो र ?
शिवको सो सिम्पल भन्ने फिल्ममा भावना हिरोइन बन्दैछिन्। ‘उसको बाल्यकालदेखिकै इच्छा थियो त्यही भएर हिरोइनको रुपमा लिएको’, बा रेग्मीले भने।
यो फिल्ममा हिरो राजबल्लभ कोइराला केही फरक भूमिकामा देखिने रे ! ‘यो फिल्ममा म आर्मीको भूमिका गर्दैछु’, उनले टिगफसँग भने- ‘अपवादपछि म नयाँ गेटअपमा देखिँदैछु।’
Bhawana Regmi, Shiva Regmi, So Simple Nepali Movie
जब्सको जीवन रहस्य के हो ?
जुलीले सुरु गरिन् बैंकिङ करिअर
सापकोटाको ‘वनको वैभव’मा वन्यजन्तुको रमाइलो बखान 13. Oct, 2020
इन्जा फेलोसीप ७० पत्रकारलाई 12. Oct, 2020
दशैँ पछिको यो जीवन 11. Oct, 2020
जो जिउने कला सिकाएर विदा भए 23. Sep, 2020
नेपालीलाई कोरोना भ्याक्सिन: संयन्त्र छ, पाउने मिति छैन 19. Sep, 2020
10 days Vipassana Apple Bhawana Regmi Deepk Rauniyar Dr. Govinda Kc Facebook Scandal Juli Pariyar Philanthropy Kathmandu Kedar Sharma Khum Bahadur Dhadka Mahabir Pun Mahesh Basnet Miss Nepal US 2012 Namaste nepal Nepali Film Highway Nepali Film Highway Media Ethics Nepal Police Nepal Vipassana Center Shankar Sharma Shiva Regmi Smita Poudel Kathmandu Nepal Kritipur So Simple Nepali Movie Spiritulaity Steve Jobs Teaching Hospital Vipassana Vipassana Meditation आँट करिस्मा कांग्रेस नेता गणेशमान सिंह गिरिजाबाबु चेतना जनआन्दोलन-२ डा. गोविन्द केसी दिलशोभा नारायण वाग्ले पशुपति भगवान मनमोहन भट्टराई मयुर टाइम्स मानवकल्याणसँग गाँसिएको नयाँ जीवनको चाहना थिएन। यात्रा समयको गर्भमा चुनौतीहरु